Laba qof oo Shacab ah oo ku geeriyootay qarax ka dhacay gobolk... | Universal Somali TV
Laba qof oo Shacab ah oo ku geeriyootay qarax ka dhacay gobolka Sh.Dhexe.
Wararka ka imanaya gobolka Sh.dhexe ayaa sheegaya in qarax xooggan lala eegtay gaari ay saarnaayeen dad Shacab ah, kaasoo marayay inta u dhexeysa degmooyinka Balcad iyo Jowhar.
Warar soo baxaya waxa ay sheegayaan in qarax ay Shabaab ku aaseen wadada dhineceeda uu qabsaday gaari noociisa lagu sheegay N3, kaasoo ku soo jeeday magaalada Muqdisho, isagoo ka soo ambabaxay magaalada Jowhar.
Qaraxa ayaa la sheegay inuu bur bur gaarsiiyay gaariga, waxaana ku geeriyooday Darawalkii gaariga waday iyo nin kaaliye u ahaa ama Kirish Boy.
Meydka labada ruux oo Shabaabka ay soo saareen gaari u socday Caasimada Hirshabelle, ayaa gelinkii danbe ee maanta lagu aasay magaalada Jowhar, iyadoo dadka ku nool Sh.dhexe ay walaac ku heyso qaraxyada buux dhaafiyay wadada xiriirisa Balcad iyo Jowhar.
Saraakiil katirsan Ciidamada Xoogga dalka, waxa ay sheegeen in qaraxa ay wadada ku aaseen Shabaab, ayna la doonayeen iney la eegtaan Ciidanka Amisom oo ay isku dayayeen iney weerar gaadmo ah ku qaadaan.
Si kastaba, Amniga wadada xiriirisa Balcad iyo Jowhar, ayaa faraha ka sii baxaya, mana jirto Siyaasad cad oo maamulka gobolka Sh.dhexe ay ku wajahaayan arintan.
Kan-xigaSawirro: Madaxweyne Farmaajo oo gaara...
Kan-horeAqriso: Qodobadii ay ku heshiiyeen ma...
46,614,473 unique visits